CONNELL အကြောင်းကိုပုံမှန်လူများထံမှ TWEETS ၂၁ ခုမှ ၄ င်းတို့သည် IV ကိုသွင်းထားခြင်းဖြစ်သည် - သတင်း
သာမာန်လူများထံမှ Connell အကြောင်းတွစ်တာ ၂၁ ခုသည် ၄ ​​င်းတို့သည် IV ကိုသွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်
သာမန်လူများယခုအပတ် BBC3 သို့ဆိုက်ရောက်ပြီးကြည့်ရှုသူအားလုံးနီးပါးကိုမျက်စိကွယ်သွားကြသည်။ ဂါးဒီးယန်းက၎င်းကိုကြယ်ငါးပွင့်အဖြစ်သတ်မှတ်သည် Telegraph ကဒါကိုရှားပါးတဲ့အပျော်သဘောလို့ခေါ်ပြီးပြပွဲကတကယ်ပဲလို့ပြောတယ် စာအုပ်ထက်ပိုကောင်းတယ် ။ Vulture ကအဲဒါကိုရိုးရိုးသားသား၊ စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ ဝေဖန်သူများက၎င်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်အများပြည်သူ - သာမန်လူတွေ - မင်းတို့ပြောနိုင်တာကတခြားသူတွေကိုသူတို့မျက်စိကြည့်တယ်။ Paul Mescal ကကစားသော C onnell သည်ကျွန်ုပ်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံ၏နှလုံးသားကိုရရှိသည်။ ငါသူကြယ်ငါးပွင့်ငါးယောက်ရှိတယ်ထင်တယ် ငါသူရှားပါးအားရစရာဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ သူကစာအုပ်ထက်ပိုကောင်းတယ်ထင်တယ်။ ငါသူ့ကိုငါ့ကိုစုပ်ခွင့်ပြုလိမ့်မယ်။
ထိုအခါငါတစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ တွစ်တာကို ၂၄ နှစ်အရွယ်သုံးပါးတစ်ဆူကျောင်းကအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ သူကလူတွေကိုနောက်ကျောပန်ကာစိတ်ကူးယဉ်ရေးသားဖို့သွားချင်ပါတယ်ရဲ့။ မိမိကိုယ်ကိုသူ၏ကွင်းဆက်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းစေရန်သူ၏ကြီးမားသော sexy လည်ပင်းပေါ်တွင်သူတို့အနားယူနိုင်သည်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကြွင်းသောအခြားသူများကဲ့သို့, သာမန်လူများစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် Connell နှင့်အတူချစ်ကြလျှင်, သူတို့သည် YouTube Fanvidis Miley Cyrus '' အရာခုနစ်ခု '' ၏အသံကိုသတ်မှတ်စေချင်တယ်။
သငျသညျလညျး Connell Waldron ၏သက်သက် sexiness သားကောင်လဲကြလျှင်, သင်သည်ဤသူတို့ tweets နိုင်အောင်နာကျင်စွာဤ tweets ဆက်စပ်ပါလိမ့်မယ်, သင်သည်ထိုသူတို့ဘောင်နိုင်ဆန္ဒရှိပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့မျှော်လင့်နိုင်သည်မှာ Paul Mescal သည်၎င်းကိုသူမြင်ပြီးသူစွမ်းအားကိုနားလည်သည်။ နောက်ထပ် ado မရှိရင်ဒီနေရာမှာ Normal People's Connell ကိုရေငတ်ပြီးပျော်စရာအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်မှုတွေစုစည်းထားပါတယ်။
၁။ ရိုးရှင်းစွာပြောပါ။ ကွင်းဆက်
Connell ရဲ့ကွင်းဆက်။ အလို။
- အမလီယာ Dimoldenberg (@ameliadimz) 2020ပြီလ 27, 2020
2. သူ့ဖြစ်တည်မှုသည် sexy ဖြစ်သည်
Connell တည်ရှိသောအခါငါ့ကို pic.twitter.com/VFDUiXW6ct
- Róisín Lanigan (@rosielanners) 2020ပြီလ 27, 2020
3. သူကဒါ sexy နှင့်တိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့် sexy ပါပဲ
သာမန်လူများထံမှကော်နဲလ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုသူတို့နှင့်သင်နှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုရန်အတွက်လုံးဝ fuck ဟုပြောခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်
- ဂျိုအဲလ်ဂိုလ်ဘီ (@joelgolby) 2020ပြီလ 27, 2020
4. trope ချစ်သူများရန်သူများ။ စကားလုံး ၄၈၀၀ ။ 18+ ဂရပ်ဖစ်လိင်မြင်ကွင်းများ။
ငါဝါသနာပါဖို့ရေးသားဖို့ငါပြုပြင်မတိုင်မီဤကဲ့သို့သောခံစားခဲ့ရဘယ်တော့မှသာမန်လူများထံမှ Connell သလောက်ကျွန်ုပ်ဘဝ၌မည်သူ့ကိုမှစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သည်ဟုမထင်ပါ
- ပေါလ်ဘလက်ခ် (@paulbIack) ၂၀၂၀ 26ပြီ ၂၆ ရက်
ငါ့ကိုသူရဲ့လည်ပင်းကိုအနံ့ခံနိုင်အောင်ငါ့ကို connell ရဲ့ကွင်းဆက်အဖြစ်အသွင်ပြောင်း pic.twitter.com/lapg9rs6nA
- Sean Bernard (@seanbgoneill) 2020ပြီလ 27, 2020
၆ ။ ကျွန်တော်ကျိန်ဆိုပါတယ်!
သာမန်လူများနှင့်ကစားသူသည်ထိုဘုရားသည်ကျွန်ုပ်၏ဘုရား၊ သင်ဤဖတ်နေလျှင်ပေါလ် Mescal ငါ quarantine ပြီးနောက်နေ့တိုင်းစာသားအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်ထွက်ချိတ်ဆက်ချင်ပါတယ် ဦး သင်နှင့်အတူငါလွတ်လပ်သောဖြစ်လိမ့်မည် cos နှင့်ကိုက်ညီသည့်မည်သည့်နေ့၌ငါနှင့်အတူထွက်ဆွဲထုတ်နိုင်လျှင်ငါ့ကိုအသိပေးပါ
- ပတ္တမြား (@RubezyK) ၂၀၂၀ 26ပြီ ၂၆ ရက်
၇။ သူ၏ Big Aul Head နှင့်၎င်းကိုထောက်ခံသည့်လည်ပင်းကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်
သေချာတာပေါ့, သင်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်သိကြလိမ့်မယ် #NormalPeople 'The Big Aul Irish Head' လို့လူသိများတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြောင့် Marianne ကိုသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့အိုင်းရစ်စ်ဟာ
သူသည် Moher ၏ချောက်ကမ်းပါးများမှထွင်းထုခဲ့သကဲ့သို့အိုင်ယာလန်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်
- လော်ရာ (@ElleEmSee) 2020ပြီလ 27, 2020
8. သူကဆက်သွယ်ရေးမှာမကောင်းတဲ့ရဲ့ဒါပေမယ့်သူကတစ်ဖွဲ့လုံးမြည်းကို Vibe ဖြစ်ခြင်းမှာကောင်းပါတယ်
Connell အမှန်တကယ်သူသည်ခပ်သိမ်းသောကာလမှာစဉ်းစားမယ့်အရာကို marianne ပြောသည်လျှင်သာမန်လူများဒါတိုတောင်းပါလိမ့်မယ်
- iana murray (@ianamurray) ၂၀၂၀ 26ပြီ ၂၆ ရက်
Connell ကျောင်းပြီးနောက်နေ့စဉ် #NormalPeople #CovideoParty pic.twitter.com/ftTItvZqah
- ဖိလစ် McNally (@PhilipMcNally) ၂၀၂၀ 26ပြီ ၂၆ ရက်
10. ol 'T က Chalamet သည်သူ၏ပိုက်ဆံများအတွက်ပြေးပေးနိုင်တယ်
- Imogen West-Knights (@ImogenWK) ၂၀၂၀ 28ပြီ ၂၈ ရက်
၁၁။ ငါ့ရင်ဘတ်ထဲတွင်ငါရှိနေစဉ် Brb ။ ဒါဟာနာရီယောက်ျားတွေတောင့်ပါတယ်။
Connell က 'မင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုငါသိပြီးသားတစ်ယောက်တည်းပဲ' လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါ 🥺 #normalpeople pic.twitter.com/bh2PdzEW4z
- (@baancs) ၂၀၂၀ 26ပြီ ၂၆ ရက်
- kendra (@auntiekenny_) ၂၀၂၀ 26ပြီ ၂၆ ရက်
ငါ့ကို Connell အပေါ် 13. တံဆိပ်ခေါင်း
ပုံမှန်လူတွေ SO fucking ကောင်းသောငါကိုယ့် connell အပေါ်သူ၏အရူးအမူးနှင့်သူ၏ငွေကွင်းဆက်လည်ဆွဲဖြစ်ပါတယ် ??? ငါဒါကိုလုပ်လို့မရဘူး pic.twitter.com/dHOpU6OXZq
- ✌️ (@hsnalaye) 2020ပြီလ 27, 2020
14. GAA ဘောင်းဘီတိုတစ် ဦး ဖော်ပြချက်ရရန်ရှိသည်
9 ဖြစ်စဉ်များ binged ပါပြီ #NormalPeople ၎င်းသည်ယခုအချိန်တွင် TV ၏အရသာအရှိဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည် - ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်း၊ ဦး တည်ချက်၊ သရုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်အဓိကအားဖြင့် Paul Mescal ၏ Connell ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်တိုသော GAA ဘောင်းဘီတိုများဝတ်ဆင်ထားခြင်း၏အဓိကရည်မှန်းချက် - bravo fine Sir ။ pic.twitter.com/q2j2ZTGLiy
- Lisa McLoughlin (@itslisamc) ၂၀၂၀ 28ပြီ ၂၈ ရက်
အကယ်၍ ဒီဟာ ၂၀၀၈/၂၀၀၉ ဖြစ်ခဲ့ရင် Marianne & Connell ဆိုတဲ့ပရိသတ်တစ်ယောက်ကိုရရှိမှာပါ<3' YouTube video by now with7Things by Miley Cyrus as the background song. #NormalPeople
- Charles (@northern) ၂၀၂၀ 26ပြီ ၂၆ ရက်
16. ငါသည်သူ၏တင်းပါးကိုမဆောင်ခဲ့ခဲ့ပါဘူး - သင်ပြု၏
Normal People အပေါ်ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်၏တစ်ခုတည်းသောအတွေးများမှာ Connell၊ သူ၏ wee ငွေကွင်းနှင့်သူ၏မြည်းသည်အလွန် sexy ဖြစ်သည်
- ဘာ (@urpalbeth) ၂၀၂၀ 26ပြီ ၂၆ ရက်
ငါကသာမန်လူတွေဆီကငိုနေရင်သူတို့ဖုံးကွယ်ထားလိုက်ပြီ၊ အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာ imogen အမှိုက်ပုံကိုရှာနေတာလားဒါမှမဟုတ် connell အရမ်းပူနေလို့ငါမပြောနိုင်ဘူး
- ဥ (@emmaggarland) 2020ပြီလ 27, 2020
တစ်ယောက်ယောက်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ရန် Marianne နှင့် Connell ၏မျက်နှာကိုအန်ဒီဆမ်ဘာ့ဂ်နှင့်ဘီလ်ဟာဒေး၏လျှို့ဝှက် skit တွင်ရှာရန်အင်္ဂလိပ်ပေါင် ၁၀၀၀ ပေးရမည်။ ဆက်သွယ်ပါ။
18. အချက်ပဲ ... သူကအိုငျးရစျလား ထို့အပြင်နက်ရှိုင်းစွာဆွဲဆောင်မှု?
Normal People ကတော့ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် Connell ကို Greg O'Shea ကကစားသင့်တယ်ဆိုတာသမိုင်းကသက်သေပြလိမ့်မယ် pic.twitter.com/tEs6eQ6f5p
- Joe Stone (@Joe_Stone_) ၂၀၂၀ 26ပြီ ၂၆ ရက်
- mils (@milliepia) 2020ပြီလ 27, 2020
- sionainn (@sionainn_dolan) ၂၀၂၀ 28ပြီ ၂၈ ရက်
• ကျွန်မတို့ကမိန်းကလေးတွေနဲ့စိတ်ရောဂါဆရာဝန်တ ဦး ကိုမေးခဲ့တယ်၊
• ကျွန်ုပ်တို့သည် 'အမျိုးအစားများ' အဘယ်ကြောင့်ရှိသည်ဟုစိတ်ပညာရှင်နှင့်လိင်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။
WTF က SFK လား။ ကျနော်တို့ Serena Fucking Kerrigan, Duke ရဲ့မိဖုရားပျားတွေ့ဆုံရန်
Lewes Court တွင်နေထိုင်သည်ဆိုလျှင်သင်နားလည်ရမည့်ရုန်းကန်မှုများ
မင်းသမီးလီယာသည်ပထမဆုံး animated မဟုတ်သော Disney Princess ဖြစ်လာနိုင်သည်
uni စာကြည့်တိုက်၌လိင်ဖျော်ဖြေမှုအပြီးတွင်အဖမ်းခံခဲ့ရသောစိတ်မထိန်းနိုင်သောမိန်းကလေးတစ် ဦး ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသည်
မနက်ဖြန် Steak နဲ့ BJ နေ့ကိုဘယ်လိုကျင်းပမလဲ။
သော့ခတ်ကျော်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အဝတ်အစားအမှတ်တံဆိပ်စတင်ခဲ့သူ Soton ကျောင်းသားတွေ့ဆုံရန်
Snow လမ်းစိန့် A: ဤတွင်ယခုအပတ်စိန့် Andrews က '' အကောင်းဆုံးဆီးနှင်း pics ဖြစ်ကြသည်